beema samiti(beema samiti) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अब सबै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने
काठमाण्डौ। नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका सबै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले अब पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने भएको छ। नियामक बीमा समितिले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै सबै जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशनअनुसार स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले कुनै पुनर्बीमा गर्न अस्वीकार...
दुर्घटना बीमा निर्देशिका जारी, व्यक्तिगततर्फ बीमाशुल्कमा छुट र सहुलियत नपाइने
काठमाण्डौ । बीमा समितिले दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ। निर्जीवन बीमा व्यवसायअन्तर्गत दुर्घटना बीमाको स्तरीकृत बीमालेख तयार गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने बीमादरसमेत निर्धारण गरी प्रचलनमा ल्याउनका लागि बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा(घ२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दुर्घटना बीमा निर्देशिका जारी गरिएको हो। दुर्घटना बीमालेख...
बीमा समितिका अध्यक्षको अस्थिर बोली, भन्छन्–‘हकप्रद रोक्ने औपचारिक निर्णय भएको होइन’
काठमाण्डौ । सुरुवाती चरणमा परिपक्व निर्णय गर्ने प्रशासकको छवि बनाएका बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको बोली समेत अस्थिर देखिन थालेको छ । यहीकारण बीमा समितिको चुक्तापूँजी वृद्धिको योजनामा उनले करिब ७ हप्तापछि बोली फेरेका छन् । असार २ गते बिजशालासँग कुरा गर्दै उनले ५ वर्ष पुराना बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजीवृद्धिका लागि...
काठमाण्डौ । नेपालको बीमा नियमनकारी निकाय बीमा समितिले उधारोमा बीमालेख जारी गरेको पाइएमा त्यस्ता बीमा कम्पनीहरुमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। बीमा समितिले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो। त्यसैले उधारोमा बीमालेख जारी नगर्न बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बीमा ऐन, २०४९...
अब बीमा कम्पनीहरुले घरजग्गाबाहेक स्थिर सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्दा बीमा समितिको स्वीकृति लिनु नपर्ने
काठमाण्डौ। अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने घरजग्गाबाहेकका स्थिर सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्दा बीमा समितिको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। बीमा समितिले गत साउन ८ गते सबै बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै बीमकहरुले अबदेखि कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने घरजग्गाबाहेकका स्थिर सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्दा...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा कम्पनीहरुका कुल बीमाशुल्क आर्जनमा बढोत्तरी भएको पाइएको छ। गत साउन १ गते बीमा समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा कम्पनीका कुल बीमाशुल्क आर्जन बढेको पाइएको हो। गत आर्थिक वर्ष जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल १ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र...
बीमा समितिले हटायो ३० दिनमा बीमालेख फिर्ता गर्न पाइने व्यवस्था
काठमाण्डौ । व्यापक विरोध भएपछि बीमा समितिले ३० दिनमा बीमालेख फिर्ता लिन पाइने व्यवस्था हटाएको छ। बीमा समितिले गत असार २३ गते जारी गरेको जीवन बीमासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बीमकहरुले जीवन बीमालेख जारी भएको ३० दिनभित्रमा बीमालेख फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी भएपछि अव्यवहारिक भएको र यसले...
अब रु. ५ लाख बढीको वार्षिक जीवन बीमालेखमा बीमितको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने
काठमाण्डौ । अबदेखि जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक वा एकल बीमा जारी गर्ने गरी बीमालेख बिक्री गर्दा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितको आम्दानीको स्रोत खुलेको कागजात अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ। नियामक निकाय बीमा समितिले जीवन बीमासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। निर्देशिकाबमोजिम...
काठमाण्डौ । बीमा समितिले कुनै पनि प्रकारका नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। बीमा समितिले एक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि नयाँ जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबीमा कम्पनीलाई इजाजत दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो। यस सम्बन्धमा कुनै पनि कामकारबाहीसमेत नभएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता...
बीमा कम्पनीहरुले सेयरबजारमा जथाभावी लगानी गर्न नपाउने, समितिका अध्यक्ष भन्छन्–‘अब नो एक्सक्यूज’
काठमाण्डौ । बीमकको लगानी निर्देशिकाले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बढी कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले साउनदेखि निर्देशिकाले तोकेको सीमाभन्दा बढी सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू हुने जानकारी दिएका हुन् । यस्तै, सेयर...
बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउने तयारी, यस्ता छन् समितिले सुझाएका तीन विकल्प
काठमाण्डौ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी थालेको छ । बीमा समितिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम असार अन्तिम साताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी पूर्वतयारी थालेको हो । यो क्रममा बीमा समितिले केही महत्वपूर्ण...
अब पुनर्बीमामा पनि ब्रोकर, लाइसेन्स लिन अधिकृत पुँजी रु. १० करोड हुनुपर्ने
काठमाण्डौ । अब संगठित संस्था दर्ता गरी पुनर्बीमा दलाल व्यवसायीको काम गर्न पाइने भएको छ। बीमा समितिले आज जारी गरेको पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम अब कुनै पनि व्यक्तिले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ५ बमोजिम संगठित संस्था दर्ता गरी ऐनको दफा ३० खबमोजिम इजाजत लिई पुनर्बीमा दलाल व्यवसायीको काम गर्न पाउने भएका हुन्।...
काठमाण्डौ । बीमा समितिबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। कम्पनीलाई बीमा समितिको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक आशयपत्र प्रदान गरेको हो। यससँगै अब कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न पाउनेछ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा उद्योग वाणिज्य महासंघका...
यी ५ कम्पनीले मागे नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको अनुमति, एउटाले मात्र पाउनेछ स्वीकृति
काठमाण्डौ । नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनको अनुमति माग्र्दै ५ वटा कम्पनीले नियामक बीम समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका छन्। बीमा समितिले पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापनाका लागि गत वैशाख २६ गते प्रस्ताव पेस आह्वान गरेको...
भोलिबाट उपत्यकामा बीमा कम्पनीका शाखाहरु बन्द हुने
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ उपत्यकामा भोलि बिहीबारदेखि बीमा कम्पनीहरुका सबै शाखा बन्द हुने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलिबाट उपत्यकामा बीमा कम्पनीका सबै शाखा कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि बीमा समितिले पनि शाखा कार्यालयहरु बन्द गर्न निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। भोलिबाट बीमा कम्पनीहरुका कर्पोरेट...